တောင်သမန်သားလေး: စမတ်ဖုန်းနဲ့ စာဖတ်လို့ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် Font Size ပြောင်းနည်း
စမတ်ဖုန်းနဲ့ စာဖတ်လို့ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် Font Size ပြောင်းနည်း
အီးမေးလ်းတွေ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် စမတ်ဖုန်းက text တွေ ပိုကြီးအောင် လုပ်နိုင်ပါသလား။ အဓိကသုံးစမတ်ဖုန်းပလက်ဖောင်းတွေမှာ text size ပိုကြီးလိုသူတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးစင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ settings တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Zoom ချုံ့၊ချဲ့လုပ်နိုင်တယ်၊ အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိမှု၊ အသံအနေအထားနဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ခြင်းစတာတွေ touch screen အကူအညီနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Android နဲ့ iOS system တွေရဲ့ မကြာသေးမီက ဗားရှင်းတွေမှာ ဒီလိုထိန်းကွပ်မှုတွေကို Accessibility settings ထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။
iPhone မောင်းနှင်လည်ပတ်တဲ့ iOS မှာဆိုရင် Settings icon ကို ဖွင့် General ကို ရွေးပြီးနောက် Accessibility ကို ရွေးချယ်ပါ။ အဲဒီ settings ထဲမှာ Larger Text ဘေးက ခလုတ်ကို On လုပ်ထားရပါမယ်။ နောက် Larger Accessibility Sizes ကို On လုပ်ပြီး မိမိနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ ပုံစံကို slider နဲ့ ရွေ့လျားချိန်ညှိပေးပါ။
တချို့ app တွေမှာ text size ပြောင်းချင်မှပြောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Mail ၊ Messages ၊ Contacts နဲ့ Calendar စတဲ့ မူလ iOS app တွေမှာ text size ပြောင်းတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ iOS system font ဟာ အေးအေးလူလူ စာဖတ်ဖို့ ရိုးစင်းလွန်းတယ်လို့ ယူဆပါက Accessibility settings ကနေ Bold Text option စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Android 7.0 စက်တွေမှာ Settings icon ကို ဖွင့်ပြီး Accessibility ကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ Font Size ကို နှိပ်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာအရွယ်အစားရွေးဖို့ slider လေး အသုံးပြုပါ။ Accessibility ထဲက Display Size controls က screen က အရွယ်အစားအတိုင်း တထေရာတည်း ချိန်ညှိနိုင်စေပါတယ်။
Posted by lin linn at 4:43 AM
ဖုန်းကို အမိူက်တွေရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီး ပေါ့ပါးစေနိုင်မယ် -CCleaner 4.6.1 APK
Paris မှာ မောင်းသူမဲ့ ယာဉ်ပျံ တက္ကစီကို ဖန်တီးမယ့် Uber
ဒွေး တိမ်တွေ ငိုတဲ့ခဏ ၊ ဒွေး ၊ နန္ဒာလှိုင် ၊ တင့်တင့်ထွန်း ၊ အောင်လွင် ၊ ဆင်မ
အန်းဒရွိုက်ဖုန်းကနေ အိုင်ဖုန်းထဲကို ဒေတာတွေ လွယ်လွ...
ဖုန်းအဟောင်းပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့် အချက် (...
ဖုန်း Lock ပိတ်ထားရင် နာရီလေးလိုပြပေးနေမယ့် Always...
သော့ခတ်ထားတဲ့ မိမိဖုန်းကို မိမိအသံဖြင့် Lock ဖွင့်...
အလွယ်တကူ ဓမ္မတရားတော်များ လေ့လာဖတ်ရူ့နိုင်မည့် Budd...
တောင်ကိုရီးယားသို့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားအဖြစ် သ...
ဖုန်း ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အားပြည့်စေမယ့် နည်းလမ်း (၄...
အရေးကြီးအချက်အလက်များအတွက် Android pattern lock မသ...
ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း display များကို Ja...
Android Virus အားလုံးကို သတ်နိုင်သည့် Mobile Ant-...
Rooted ဖြစ်ပြီးသား Android phone တွေကို CMD ကနေ Vi...
Samsung FRP တွေကို ဖြုတ်နိုင်မည့် Tool တစ်ခု (Easy...
မိမိဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်မယ်...
စမတ်ဖုန်းနဲ့ စာဖတ်လို့ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် Font Siz...
Android မှာ မသုံးသင့်တဲ့ App ငါးမျိုး
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger v 101.0.0.18.337 ap...
♪ " Move to iOS " Android ဖုန်း အသုံးပြုနေရာကနေ iO...
၂၀၁၇ မှာ ထွက်လာမဲ့ iPhone တို့ရဲ့ အကြောင်း
♪ " အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Encryption Tools " ဆောင်းပါး...
Android ဖုန်းမှာ Wifi Hotspot အသုံးပြုနည်း
ဆယ်လ်ဖီရိုက်ရင် လက်နှစ်ချောင်း မထောင်သင့်တဲ့ အကြော...
သင့်ဖုန်းကို ဒီအရာတွေက ပျက်စီးသွားစေနိုင်
ငွေကုန် သက်သာစေတဲ့ အင်တာနက် သုံးနည်း
“YouTube မှာ Message ပို့နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပါလာ”
သင့်ရဲ့ Public Post များမှာ Friends မဟုတ်သူများရဲ့...
ခရီးသွား ပြည်သူများတွက် အကောင်းဆုံး ကားမောင်းလမ်းည...
Facebook မှာ သင်Like , Camment ပေးလိုက်ဒါကို သင့်F...
အော်ရီဒူး ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါ ဖြည့်ရုံနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် အခ...
Samsung Galaxy Note3ကိုမြန်မာစာမှန်အောင် ပြုလုပ်...
Facebook Lite application Version 25.0.0.8.145 Apk...
English လေ့လာသူများအတွက် အရမ်းကောင်းတယ် အင်္ဂလိပ်စာ ...
♪ “MPT 4U Application ဖြင့် Sim Card မှတ်ပုံတင်ခြင...
ဖုန်းထဲကနေ Webview Apk ပြုလုပ်နည်း
ပုဂံကီးဘုတ် လန်းလန်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ Facebook အကောင့် တရားဝင်ဖြစ်စေဖို့ Facebook I...
မိမိတင်တဲ့ Post တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေဘဲ Comment ပေး...
2016 5.1,6.0 Samsung ဖုန်းများအား Root မလုပ်ဘဲ မြန...
Gx Tool ~ Emmc Pinout Tools For Multi-Models ALL I...
Font Not Supported ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း (၂)
Facebook Messenger ကနေ SMS ဖတ်ရှု၊ ပေးပို့နည်း
သင့်ရဲ့ Android Phone ကို တီဗီနဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းများ...
♪ Contack , Call Log ,SMS တွေကို Backup ယူထားပေးမယ...
♪ ပြင်ပမှအသံမျိုးစုံကိုလွယ်ကူစွာဖမ်းယူထားနိုင်တဲ့ ...
မြန်မာဖောင့်လှလှ အသုံးပြုချင်သူများအတွက် - Myanmar...
Programing Language ဖြင့်တဲ့ HTML ကို လေ့လာချင်တဲ့...
" --ျ " ယပင့်တွေ မကပ်တဲ့ Myanmar Zawgyi Font For A...
Viber မှာ မက်ဆေ့နှင့်ဖုန်း Call လာရင် မီးအလင်းနဲ့ ...
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ Application များ
ကိုယ့်ဖုန်းကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်နေတဲ့ အလေ့အကျင...
2Step ခံထားတဲ့ facebook အကောင့်ကို 2Step ပြန်ပိတ်န...
Samsung Galaxy A3 Series All Model Android 6.0.1 R...
မြန်မာဖောင့်လှလှ အသုံးပြုမယ်သူများအတွက် - Myanmar ...
♪ အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း အခမဲ့ရနိုင်မယ့် iOS app မျ...
Samsung J7 SM-J710FN (2016) ဖုန်း Custom Binary bl...
2017 တွက် အကောင်းဆုံး ဖုန်းမြည်သံများ New Ringtone...
♪ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်များကို အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူနိုင် ♫...
♪ Sticker နဲ့ Status တင်လို့ရပြီဆိုတဲ့ Facebook Ve...
Xiaomi (သို့) MI အကြောင်း သိကောင်းစရာ
COC ကိုမြန်မာစာ၊ မြန်မာဘာသာ ၁၀၀% ထည့်သွင်းအသုံးပြု...
အွန်လိုင်းမလိုဘဲ ရှာဖွေမှုနဲ့ လမ်းညွှန်စနစ်တွေကို G...
အင်္ဂလိပ်စာကို မြန်မာစာလို ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆ...
၀က်ဆိုက်များမှ သတင်း၊ ဆောင်းပါးများကို Facebook တွ...
Messenger မှာ အလိုလိုပျောက်သွားတဲ့မက်ဆေ့တွေ ဘယ်လို...
အင်တာနတ်လိုင်းကို အချိန်သတ်မှတ်၍ အော်တိုပိတ်နိုင်မ...
♪ Zalo App မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းဈေးဝယ်နိုင်မည် ♫
ဗားရှင်းအသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ Bagan Keyboard for Myanm...
ဧရာဝတီဘဏ်တွင် MPT ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စီစဥ...
♪ စမတ်ဖုန်းကနေ ဘာသာစကားအသစ်များ သင်ကြားနိုင်မယ့် ၀...
♪ မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ကျော်ဖြတ်နည်း...
ZawGyi Font အလှ ၇ မျိုးကို အင်တာနက်မလို Root မလို
iOS Device ပေါ်ကနေ facebook video တွေကို download လ...
ဖုန်းအားသွင်းပြီးတိုင်း ပလပ်ကြိုးဖြုတ်ထားသင့်တဲ့ အ...
ဓာတ်ပုံတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Photo Ed...
Myanmar All Sim Register Updated 2.2 ထွက်ရှိလာပါပြ...
သမ္မတရုံးကို တိုင်စာ၊ အကြံပြုစာ ရေးသားပေးပို့နိုင်သ...
အင်တာနက်ပေါ်မှ (MP4) ဗွီဒီယို,(MP3) သီချင်း များကို...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံကနေ... Text (စာသားနဲ...
Mi Note2ဖုန်းကို TWRP Recovery ထည့်သွင်းပြီး Roo...
Bagen KeyBoard ကုဒ်ထည်စရာမလိုဘူး Free APK